တရားစခန်းဝင် ကုသိုလ်ယူနေတဲ့ မေသန်းနု – Cele Love
တရားစခန်းဝင် ကုသိုလ်ယူနေတဲ့ မေသန်းနု
Posted by TheinGi on December 1, 20180Comments
အကယ်ဒမီ မေသန်းနုက ဒီနေ့(ဒီဇင်ဘာလ ၁)ရက်နေ့မှာပဲ တရားစခန်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က ဆိုပါ တယ်။ စင်ရော် မောင်မောင်နဲ့ မေသန်းနုတို့ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေသာမက ဘာသာရေးတွေမှာလည်း အချိန်ပေးဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အကယ်ဒမီ မေသန်းနုက ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာပဲ တရားစခန်းစဝင်နေပြီလို့ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က ပြောပါတယ်။ မေသန်းနုက လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက် လုပ်နေတဲ့ ကြားက သာသနာအကျိုးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အချိန်ပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
” Daw May Than Nu ! ဒီ နေ့ တရားစခန်း စဝင်ပြီ။ သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပါသည် ” လို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီက စင်ရော် မောင်မောင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သားလေး မင်းသန့်မောင်မောင် နဲ့ မေသန်းနု တို့ရဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ လေးကိုလည်း တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ တရားစခန်းဝင်တယ်၊ ဘယ်နှရက်ကြာမယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြောပြထားတာ စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ မေသန်းနု တို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ပြောပြထားတာ မရှိပါဘူး။
ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်ကလည်း၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ “ထာဝရအမေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဒါရိုက်တာဆု ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ စင်ရော် မောင်မောင် က ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ “တပြည်သူမရွှေထား” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ “လျှို့ဝှက်သောနှင်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် သူတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင်ကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးမှုတွေကနေ ပရိသတ်သိရှိလာတာပါ။ မင်းသန့်မောင်မောင်က လက်ရှိမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Los Angeles, California, New York Film Academy School မှာ ပညာသင်ယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အနုပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အကယျဒမီ မသေနျးနုက ဒီနေ့(ဒီဇငျဘာလ ၁)ရကျနမှေ့ာပဲ တရားစခနျးဝငျခဲ့တယျလို့ ဒါရိုကျတာ စငျရျောမောငျမောငျက ဆိုပါ တယျ။ စငျရျော မောငျမောငျနဲ့ မသေနျးနုတို့ဟာ အနုပညာအလုပျတှသောမက ဘာသာရေးတှမှောလညျး အခြိနျပေးဖွဈနကွေတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အကယျဒမီ မသေနျးနုက ဒီဇငျဘာလ ၁ ရကျနမှေ့ာပဲ တရားစခနျးစဝငျနပွေီလို့ ဒါရိုကျတာ စငျရျောမောငျမောငျက ပွောပါတယျ။ မသေနျးနုက လကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှေ ဆကျတိုကျ လုပျနတေဲ့ ကွားက သာသနာအကြိုးကို တဈဖကျတဈလမျးက အခြိနျပေးနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။
” Daw May Than Nu ! ဒီ နေ့ တရားစခနျး စဝငျပွီ။ သာဓု သုံးကွိမျ ချေါဆိုပါသညျ ” လို့ ဒီဇငျဘာလ ၁ ရကျနေ့ မနကျ ၉ နာရီက စငျရျော မောငျမောငျရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ရေးသားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ သားလေး မငျးသနျ့မောငျမောငျ နဲ့ မသေနျးနု တို့ရဲ့ အမှတျတရ ဓာတျပုံ လေးကိုလညျး တငျထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဘယျနရောမှာ တရားစခနျးဝငျတယျ၊ ဘယျနှရကျကွာမယျ ဆိုတာကိုတော့ ပွောပွထားတာ စငျရျောမောငျမောငျနဲ့ မသေနျးနု တို့ ဖစျေ့ဘှတျအကောငျ့မှာ ပွောပွထားတာ မရှိပါဘူး။
ဒါရိုကျတာ စငျရျောမောငျမောငျကလညျး၂၀၁၇ခုနှဈမှာ “ထာဝရအမေ” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ဒါရိုကျတာဆု ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒါရိုကျတာ စငျရျော မောငျမောငျ က ၁၉၉၄ ခုနှဈမှာ “တပွညျသူမရှထေား” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ အကောငျးဆုံး ဒါရိုကျတာဆုကို ရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ “လြှို့ဝှကျသောနှငျး” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ အကောငျးဆုံး ဒါရိုကျတာဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျ သူတို့ရဲ့ တဈဦးတညျးသော သားဖွဈသူ မငျးသနျ့မောငျမောငျကိုလညျး ငယျစဉျကတညျးက ကွျောငွာတှရေိုကျကူးမှုတှကေနေ ပရိသတျသိရှိလာတာပါ။ မငျးသနျ့မောငျမောငျက လကျရှိမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံရှိ Los Angeles, California, New York Film Academy School မှာ ပညာသငျယူနတော ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ အနုပညာဆိုငျရာ ဘာသာရပျမြားကို လလေ့ာနတောဖွဈပါတယျ။